Help chọrọ Nyere Aka na Ndị Azụmahịa na-ege ntị? Malite Ebe a | Martech Zone
Injinia abughi oru dika o si ele uwa anya. Maka ndị na-ere ahịa, ịtụle ọnọdụ a mgbe ị na-agwa ndị na-ege ntị na teknụzụ nwere nghọta nke ọma nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti ịbụ ndị ejiri akpọrọ ihe na ileghara anya.
Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia nwere ike ịbụ ndị na-ege ntị siri ike ịgbawa, nke bụ mkpalite maka Ọnọdụ Ahịa nke Ndị Injinia Na-akọ. N'afọ nke anọ n'ahịrị, TREW Ahịa, nke na-elekwasị anya na ahịa ndị na-ege ntị na teknụzụ, na GlobalSpec, onye na-eweta usoro azụmaahịa na-arụ ọrụ data na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-emekọ ihe ọnụ na nyocha na nyocha usoro, ụdị ọdịnaya dijitalụ, na nyiwe mmekọrịta mmadụ nke kachasị dị irè maka iru ndị injinia.
2020 wetara nsogbu ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya na nsogbu COVID-19, na akụkọ nke afọ a gụnyere ajụjụ banyere otu ndị injinia si enyocha ihe atụ na-atụghị anya ya na ihe omume mebere na otu ha si achọta ụzọ ọhụrụ iji mụta banyere ngwaahịa na ọnọdụ ọhụrụ.
N'afọ a, ikekwe ọ bụghị na mberede, bụkwa nnukwu ụdị nha nke ụbọchị maka nyocha a - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị injinia 1,400 na ndị ọkachamara na teknụzụ gburugburu ụwa na-aza. Ndị zaghachiri sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche sitere na ọrụ dị iche iche, site na ọrụ injinia, ike, na ikuku / nchekwa na ụgbọ ala, semiconductor, na akụrụngwa.
Nghọta gụnyere omume nchịkọta ozi, mmasị ọdịnaya, na atụmanya njikọ aka nke ndị na-ege ntị na teknụzụ - yana mmetụta nke COVID-19 na ahịa.
Ihe nchoputa ole na ole na akuko 2021 gunyere:
62% nke ndị zaghachiri mezue ihe karịrị ọkara nke njem azụmaahịa na ntanetị
80% nke ndị injinia chọtara uru site na ihe omume mebere, mana okpukpu abụọ karịa karịa webinars karịa ihe omume mebere
96% nke ndị injinia na-ele vidio kwa izu maka ọrụ, ihe karịrị ọkara na-ege ntị pọdkastị maka ịrụ ọrụ mgbe niile
Ndị injinia dị njikere idejupụta akwụkwọ maka ọdịnaya dị ukwuu dị ka akwụkwọ ọcha na eserese CAD
Mgbado Anya Pụrụ Iche: robịaru vidiyo na pọdkastị
Ewu ewu nke vidio na pọdkastị pụtara ìhè n'etiti ụzọ ọhụrụ ndị na-ege ntị si achịkọta ozi, ọkachasị ka ọ gbasara etu ndị ahịa si eme ihe ọmụma a.
Pasent iri itoolu na isii nke ndị injinia na-ele vidio kwa izu maka ọrụ, ihe karịrị ọkara na-ege ntị pọdkastị maka ọrụ mgbe niile.
2021 State nke Ahịa Nye Ndị Injinia
Creatmepụta ọdịnaya a na-achọ nwere ike ọ na-arụ ọrụ n'ime atụmatụ ọtụtụ ndị ahịa, mana enwere ụjọ banyere ịme ihe na-enweghị uru mmepụta anyị nwere ike iji mee na vidiyo na pọdkastị anyị na-eri na ndụ anyị. Site na oke vidiyo na ọdịnaya pọdkastị na -emepụta, nke a ekwesịghị ịbụ ihe mgbochi ịbanye n'ọgbọ a.
Enwere nhọrọ doro anya n'etiti ndị na-ahụ maka ọrụ ntanetị maka ezigbo ọdịnaya nke ahụ gbadoro anya n’ịkụzi gbasara ihe ntụrụndụ, onye ọ bụla bido n’otu ebe. E nwere ụfọdụ nnukwu akụ na ibido pọdkastị na ihe okike vidiyo, ọ ga-eju gị anya na obere ihe achọrọ.
Nkwupụta ahụ na-akọwapụta nchọpụta dị oke mkpa na nkwubi okwu, yana data zuru oke site na mpaghara ụwa na otu ọgbọ, ma ọ bụ debanye aha maka webinar iji nweta nghọta banyere otu esi eji data sitere na ọmụmụ a iji mepụta mmemme azụmaahịa B2B kachasị mma.
Download 2021 State nke Ahịa ka Injinia
Maka ndụmọdụ ndị ọzọ bara uru banyere otu esi erute ndị ọrụ ntanetị aka, soro blog TREW Marketing Ebe a.
Jide n'aka na ị ga-ege ntị na mkparịta ụka mụ na Douglas gbara Martech Zone Ajụjụ Ọnụ na-atụle nyocha na omume kacha mma gbasara ahịa ndị injinia:
Tags: 2021content Marketingatụmatụ ịre ahịa ọdịnayaCOVID-19dijitalụ ahịa azumahia ndị injiniaọrịaakụkọahịa trew
N'ime afọ 20 gara aga, Wendy enyerela ọtụtụ narị ụlọ ọrụ teknụzụ aka ịtụkwasị obi ma mejupụta pipeline ahịa ha site na iji ọdịnaya dị egwu. Companylọ ọrụ ya, TREW Ahịa, bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa zuru oke nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ijikọ ndị ahịa, wulite ntụkwasị obi, na ị nweta nsonaazụ na-adigide site na iji usoro ahịa ọdịnaya egosipụtara.
Ngwa SwiftChat Live Chat
Mar 15, 2021 na 8: 28 AM
Mgbe ị na-erere ndị na-ege ntị na teknụzụ, ị kwesịrị ijide n'aka na ha hụrụ gị dị ka olu tozuru oke nke na-ewetara ha ihe bara uru.